combobox atocomplete search in C# windowform — MYSTERY ZILLION
combobox atocomplete search in C# windowform
ကျနော် combobox autocomplet mode ကို suggest append, combobox autocomplete source ကို listItem , properties ထဲ ထည့်ပါတယ်။
first letter နဲ့ စ တဲ့ list ကိုsearch တာ အဆင် ပြေပါတယ်။ ဥပမာ abc,bac,zhk,zka,agn list မာaလို့ ရိုက် search ရင် abc,agn ပြပါတယ်။ ကျနော် search ချင်တာကaလို့ ရိုက်search ရင် abc,bac,zka,agn list ကို ရချင်တာပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြပေးပါ။
sorry for my text format.i m difficult in unicode myanmar font.I will try later.Please answer me.
search order က ဘယ်လိုလဲဗျ။ သေသေချာချာ မရှင်းလို့။ပုံမှန် အားဖြင့် search ပုံစံက
search order ကို တချက်လောက် ရှင်းပြပေးပါ။
နောက်ပြီးတော့ msql server သုံးတာလား ? windows form မှာ auto complete က မခက်ပါဘူး။ AutoCompleteCustomSource ကို သုံးရင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် search order ကတော့ သူပေးသည့် အတိုင်းပဲရမယ်။
စိတ်ကြိုက်လိုချင်ရင်တော့ ပြန်ရေးမှ ဖြစ်မယ်။
July 2017 edited July 2017 Registered Users
search ကaပါတဲ့ list အကုန်လံုးဗျ *a* ဖြစ်မယ် sql server 2008 ပါ Autocomplete ကိုသံုးတာ searchOrder က a* ပဲရတာပါ ဟုတ်ပါတယ် ပြန်ရေးရမယ်ထင်ပါတယ်
code sample ရရင် share စေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ
for customize => use sql query where column like '%a%'